Ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina no safidy tian'ny Britanika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina no safidy tian'ny Britanika
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Nihaona indray ny indostrian'ny dia tao amin'ny WTM London
Tsy mahagaga raha saika ny antsasaky ny mpiala sasatra no te-hiditra any amin'ny toeram-pialan-tsasatra misy masoandro - indrindra fa ny fahavaratra britanika dia nandiso fanantenana indray ho an'ireo mijanona.
Ny fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika fly-and-flop no safidy ankafizin'ny Brits izay maniry fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina amin'ny herintaona, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Efa ho ny antsasany (43%) no mikasa ny hitsoaka any amin'ny rivo-piainana any ivelany no nilaza fa fialantsasatra amoron-dranomasina no ho safidiny.
Ny safidy faharoa malaza indrindra dia ny fiatoana tanàna, notononin'ny ampahatelony (31%) tamin'ireo namaly. Ny safidy malaza hafa dia ny fialan-tsasatra (16%), ny fitsangantsanganana (15%), ny fahasalamana (8%) ary ny ski (7%).
Angamba hita taratra ny zava-misy fa voafetra be ny faravodilanitra amin'ny 2020 sy 2021, efa ho ny ampahefany (23%) no nilaza fa te handeha lavitra, raha 17% kosa no afa-po tamin'ny fiatoana fohy.
Ary ny fomba famandrihana dia toa hita taratra ihany koa ny olana miely patrana amin'ny famerenana ny fialan-tsasatra sy ny fanafoanana mandritra ny areti-mifindra, miaraka amin'ny ampahatelon'ny mpanjifa (31%) nilaza fa hamandrika fonosana izy ireo, ary 8% fotsiny no misafidy ny trano fonenana amin'ny toekarena mizara - toy izany. toy ny AirBnB - raha misy 8% hafa milaza fa ho faly amin'ny fialan-tsasatra DIY.
Ny valiny dia avy amin'ny WTM Industry Report, izay nanadihady mpanjifa 1,000 momba ny drafitry ny diany - ary ny 648 tamin'izy ireo dia nilaza fa te hanao fialantsasatra any ivelany amin'ny fahavaratra manaraka.
Rehefa nanontanian'ny mpanao fitsapan-kevitra momba ny toerana tian'izy ireo haleha, dia Espaina ny toerana mafana indrindra, arahin'ireo ankafizin'ny Eoropeana nentim-paharazana hafa toa an'i Frantsa, Italia ary Gresy, ary Etazonia - izay tsy voafefy ho an'ny mpiala sasatra anglisy hatramin'ny nisian'ny areti-mifindra. tamin'ny March 2020.
Ny fikarohana dia ho vaovao tsara ho an'ny varotra fitsangatsanganana fialamboly, izay niady tamin'ny korontana efa ho roa taona, fameperana ary hafatra misavoritaka avy amin'ny minisitra.
Ny fikarohana nataon'i Abta dia nanoro hevitra fa ny famandrihana amin'ny fahavaratra 2021 dia nidina 83% tamin'ny taona 2019 ary saika ny antsasaky ny orinasam-pitaterana dia nitatitra fa tsy nisy fitomboana tamin'ny famandrihana tamin'ny taona 2021 raha oharina tamin'ny taon-dasa, na dia teo aza ny programa vaksiny izay nahitana mihoatra ny 80% amin'ireo olon-dehibe UK mendrika dia efa jabbed tanteraka.
Ny biraon'ny mpizahatany avy any amin'ny toerana toa an'i Espaina, Frantsa, Italia, Gresy ary Etazonia dia efa nanatsara ny hetsika fampiroboroboana azy ireo nandritra ny fahavaratra mba hahazoana antoka fa ny fireneny dia eo anoloan'ny varotra sy ny mpanjifa.
Ary ny zotram-piaramanidina sy ny mpandraharaha dia nanangona fahaiza-manao rehefa miverina ny fangatahana, indrindra rehefa mihena ny fameperana toy ny rafitra jiro fifamoivoizana sy ny fitsapana PCR.
Simon Press, WTM London, Talen'ny Fampirantiana, dia nilaza hoe: “Efa niaritra fameperana fitsangatsanganana efa ho roa taona izahay sy fitsipika mampisafotofoto sy lafo, ka tsy mahagaga raha saika ny antsasaky ny mpiala sasatra no te-hiditra any amin'ny toeram-pialan-tsasatra misy masoandro - indrindra fa ny fahavaratra britanika. nandiso fanantenana indray ho an'ireo mijanona.
"Ny ankamaroantsika dia nofonosina tao an-trano nandritra ny fanakatonana ary maro amintsika no mbola miasa any an-trano, noho izany dia tena maka fanahy ny fahatsinjovana ny miala sasatra amin'ny masoandro amin'ny Med."